Nyochaa WIKO Y61, bụ isi ama ama ama ama | Gam akporosis
Lee anyị ọzọ na nyochaa na smartphone. N'okwu a, anyị enweela ike ịnwale ọnụ site na WIKO firm, kpọmkwem ndị WIKO Y61. Ekwentị anyị nwere ike ịchọta na ntinye ntinye n'ime ahia gam akporo, ma nke ahụ na-abịa na ọchịchọ inweta ọnọdụ nyere uru ndị ọ na-enye anyị.
Ndị na-eme WIKO amabeghị ndị ọrụ ya, nwekwa ụdị dị iche iche abịala. Ihe nzuzo nke onye nrụpụta a dị mfe, chekwaa ego iji nye ngwaahịa dị ọnụahịa, ma na-enweghị ịchụ àjà na ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ zuru oke ma na-asọmpi.
1 WIKO Y61, ihe niile ị chọrọ maka ihe pere mpe
2 Mbupu WIKO Y61
3 Ọdịdị nke WIKO Y61
3.1 A dị nnọọ egwu n'azụ
4 Ihe ngosi WIKO Y61
5 Kedu ihe dị n'ime WIKO Y61?
6 The WIKO Y61 ka igwefoto
6.1 Ngwa igwefoto
7 Foto ndị WIKO Y61 sere
8 Enweghị nchekwa
9 Batrị, obodo kwụụrụ ya na sọftụwia
WIKO Y61, ihe niile ị chọrọ maka ihe pere mpe
Ọ bụghị ndị ọrụ niile nke ekwentị chọrọ (ma ọ bụ nwere ike) lee ụdị kachasị "elu" Site na ahịa. Ma ọ bụ maka obere mmefu ego, ma ọ bụ maka ojiji a ga-enye ekwentị, ndị kasị mara amara nke ọ bụla na-emepụta adịghị achọ mgbe niile. Enweghikwa smartphones niile amuru na ochicho nke ibu ihe kachasi nke udi ya.
WIKO maara nke ọma Ike nke ahịa ekwentị ntinye, ma gaa n'ihu ịmepụta ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma na ngalaba ahụ. Malite site na obere ntọala nke na-eme na smartphone bụ 100% arụ ọrụ na mpaghara niile, na ịchekwa akụkụ dị ka ihe owuwu.
Anyị nwere ike ikwu n'enweghị nsogbu na WIKO Y61, ama na ị nwere ike ịzụta ugbu a maka ihe na-erughị euro 100, nwere ike iji ekwentị gị mee ihe niile ịchọrọ. Anyị agaghị ekwu na n'otu ụzọ ahụ dị ka ndị ọzọ dị ike karịa. Gaghị enwe ike ịnụ ụtọ ihe ọhụụ kachasị ọhụrụ kachasị egwu kachasị egwu na ahịa. Mana dika anyi kwuru, ihe mgbaze na arụ ọrụ.
Mbupu WIKO Y61
Oge eruola imepe igbe nke WIKO Y61 a iji lelee ihe anyị hụrụ n'ime. E wezụga nke ngwaọrụ, nke anyị na-ahụ na nke mbụ, anyị nwere ihe dị iche iche fọrọ nke nta niile na-atụ anya. Anyị nwere Chaja chaja na eriri USB maka ịchaji na nnyefe datas na usoro Micro USB, usoro nke na-eguzogide na ngwaọrụ ụfọdụ, ọkachasị na ntinye ntinye.
Anyị achọpụtakwala ngwa ngwa maka ngwaọrụ n'onwe ya dịka a ihe nchebe ihuenyo, na ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke iko nwere obi ụtọ, ọ na-enwe ekele mgbe niile. A Silicone n'ọbọ na ezi aka, dị mma adịgide, na na dabara n'ụzọ zuru okè, ezi uche.
Obere ihe ijuanya na odidi nke kpuru isi. Na ileba anya mbụ ma metụ ha aka, ha bụ isi, nke a bụ ihe anyị na-akwado mgbe anyị jikọtara ha na smartphone wee jiri ha. N'agbanyeghị nke ahụ, na-amalite site na ndabere na ha agaghị abụ ihe kachasị mma ị nwetala, ọ na-enwekarị obi ụtọ inwe ike ịnwe ekweisi ọhụrụ, ihe ọtụtụ ndị nrụpụta kwụsịrị gụnyere afọ ndị gara aga.
Zụrụ WIKO Y61 na Amazon maka ihe na-erughị € 100
Ọdịdị nke WIKO Y61
Na imewe ebe a na-ahụ anya na anya ọtọ ihe dị iche na ngwaọrụ dị ọnụ ala na nke na-abụghị. Anyị ahụghị ihe ọhụrụ, n'eziokwu, nhazi nke WIKO Y61 nwere ike izu oke nke ekwentị site na 5 afọ gara aga maka ọtụtụ ihe. Mana nke a abụghị ihe kpatara anyị ji ekwu maka ekwentị dị "njọ", tere aka na ya, kemgbe na azụ, imewe mma a otutu na-abịaru nso nke kachasị ugbu a.
Ọ bụrụ na i lee anya na n'ihu nke, anyị na-ahụ na ihuenyo nwere nnukwu osisi na okpokolo agba, dị gịrịgịrị. Enweghi ihuenyo enweghi ngwụcha, igwefoto dị n’okpuru ihuenyo ma ọ bụ “gbapụta”, igwefoto dị n’elu ihuenyo ahụ. Ee n'ezie, na nha ihuenyo dị nso taa gua ya na diagonal nke 6 sentimita.
A dị nnọọ egwu n'azụ
Azụ nke WIKO Y61 dị egwu. Na ihe owuwu bụ plastic site na nkedo na-egbuke egbuke, ihe na-amalitekwa na ngwaọrụ site na afọ ole na ole gara aga. Mana nke puru iche karie bu nke ahu azụ mkpuchi bụ mbughari. Anyị ga-ewepu ya ka anyị nwee ike itinye kaadi SIM anyị na kaadi ebe nchekwa. Ma ruo anyị nwere ike iwepu batrị ahụKemgbe ole mgbe ka ị nweghị smartphone nwere ihe abụọ ndị a na-ewepụ ewepụ?
Na-adabere a mbughari azụ nwere ike tinye mmezi anwụ ngwa ngwa. Ya mere na casing nwere ike mfe wepu, ọ bụ ejiri plastik na-agbanwe agbanwe nke ahụ na-enye ohere ịgbaghari mgbe ị na-adọta site na mmeghe taabụ. Nke a na-emesi anyị obi ike a nnukwu iguzogide oke ụjọ na ịda nke ahụ agaghị eweta nsogbu maka ihe ndị a.
Kemgbe ole na ole ka ị nweghị ama nwere iwepụ na batrị? Nke a bụ Wiko Y61. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-agwa gị ihe niile na nyocha ọzọ. #egharị
A post na-akọrọ site Gam akporosis (@androidsisweb) na Ọkt 8, 2020 na 9: 45am PDT
En ala nke ngwaọrụ anyị hụrụ naanị ọkà okwu, naanị otu dị ka atụ anya ya, na igwe okwu. Na elu bụ Micro USB odori n'ọdụ ụgbọ mmiri, o yiri ka anyị agaghị ewepụli ya ruo mgbe ebighị ebi. Anyị chọpụtakwara a Ntinye ederede audio 3,5mm jikọọ ekweisi.
na aka ekpe anyị hụrụ a otu bọtịnụ a raara nye naanị nyemaka mebere nke Google. Site na ịpị bọtịnụ anyị ga-enwe ihe niile Google na-enye maka ọrụ anyị. Mana anyị kwesiri ịmara na ọ ga-ahazi tupu oge eruo iji nweta ọtụtụ ihe na ya. Na na Aka nri bụ mkpọchi / kpọghee ma gbanye / ngbanwuna bọtịnụ akara olu.
Ihe ngosi WIKO Y61
Anyị ekwuola ya n'ihu ngwaọrụ ahụ nwere ọdịdị dịtụ ọhụrụ. Nke a bụ n'ihi okpokolo agba na anyị na-ahụ na ihe niile nsọtụ nke ihuenyo. Mana nke a abụghị ihe mere anyị ji jiri obere ihuenyo na-eche ihu ọnụ. Ejiri WIKO Y61 nwere a 6 anụ ọhịa ahụ diagonal, a nnọọ anabata size, ma na a pasent nke n'ihu ogwe aka biri dị ala dị ka 73%.
Ihuenyo bụ ụdị IPS LCD na a ntụpọ 18:9, n'ezie pere mpe karịa nke anyị ejirila na mbipụta ndị ọhụrụ. Dị ka a ga-atụ anya ya, mkpebi Ọ naghị enwu maka ogo ya, mana anyị ga-ekwu na o mechuola anyị ihu ebe ọ bụ na o pere mpe karịa, naanị 480 x 960, dara ogbenye n'ezie, ma ọ dị mwute ikwu na ọ na-egosi.
Anyị nwere ike ikwu ntakịrị ihe banyere ihu igwe WIKO Y61 a maka na o nwechaghị ọtụtụ ihe ị ga-enye. Ya Njupụta bụ 179 dpi, Ọ bụkwa nke ọma n'okpuru ihe anyị na-ahụ taa na ụdị ndị ewepụtara na nso nso a. Mana dị ka anyị si mara, anyị na-ekwu maka ngwaọrụ na-ebelata ego iji wee bụrụ ọnụ dị ka o kwere mee. Ihuenyo na-ezukọ na-enweghị nsogbu maka isi eji ngwaọrụ, na-enweghị ndị ọzọ.
Ihe na-amasị anyị bụ nnabata a obere Ikanam ìhè maka ificationsma Ọkwa na elu ihuenyo. Nhọrọ nke, dịka iwu, enweghị ike ịgbakwunye site na smartphones nwere ngwụcha ngwụcha. Inwe okpokoro n’elu na-enye gị ohere itinye igwefoto dị n’ihu n’ụzọ dị mfe, yana ụfọdụ ihe ndị ọzọ bara uru nke na-eri ihe dabara adaba na ihuenyo niile. Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ama dị mfe ma rụọ ọrụ, ebe ị nwere ike ịzụta ugbu a WIKO Y61
Kedu ihe dị n'ime WIKO Y61?
Anyị kwesịrị ịma na ama a Ọ dị na mpaghara kachasị dị na ahịa gam akporo. Malite na ntọala ahụ, na ịga ọnụahịa dị oke ala, anyị enweghị ike ịtụ anya nnukwu ihe ịtụnanya na nhazi na ike. Anyị na-enyocha ekwentị dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala ma nke a na-egosi na ọ nwere ike inye anyị.
Maka njikwa, Wiko kpebiri ịtụkwasị MediaTek ọzọ, kpọmkwem ọ na-arịgo na MediaTek Helio A20 (MT6761D). A mgbawa nke quad-isi quad-isi elekere na 1.8 GHz. Anyị chọtara a RAM ebe nchekwa nke naanị 1 GB. Data dị n'okpuru ihe anyị nwere ike ịtụ anya ọbụlagodi na usoro kachasị.
Anyị na-ahụ otú ngwaọrụ ndị ọzọ nwere otu mgbawa sirila nwee ike mezue karịa RAM, oge ụfọdụ na-eru 4 GB. Banyere ikike nchekwa anyị na-ahụ 16 GB. Anyị nwere ike ịgbasa ikike nchekwa site na iji kaadi SD Micro.
The WIKO Y61 ka igwefoto
Oge eruola ka nyochaa igwefoto nke smartphone a site na WIKO. Dị ka akụkụ ndị ọzọ, nke igwefoto anyị chere na anyị enweghị ihe mmetụta "elu", ma anyị na-atụ anya na ọ ga-ezute ezigbo opekempe. Emeputa onwe ya na-akpọ ya Gaa igwefoto, maka di na nwunye nke atụmatụ ndị agbakwunyere site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Anyị nwere otu ihe mmetụta nwere mkpebi nke 8 Mpx ụdị CMOS na ya anaghị akpa agwa ọ bụla dị njọ na jisiri ike chebe onwe ya na ọnọdụ nke ezi eke ìhè. Mana gịnị nwere oge dị njọ mgbe anyị chọrọ ịse foto na ọnọdụ ndị kawanye njọ. Mkpebi ya anaghị enye ihe ọzọ, ozugbo anyị hụrụ mkpọtụ na obere nkọwa. Ọ na-ewe ọtụtụ ihe iji lekwasị anya na flash, ọbụlagodi na arụ ọrụ, anaghị akwụsị ịwụ elu mgbe ọ bụla anyị chọrọ ya.
N'ihu, n'elu dị na igwefoto onwe. Igwefoto nwere Anya 5MP nke anyị na-enweghị ike ịkọwa ọtụtụ. Anyị nwere ike ịsị na ọ na-emezu ebumnuche ya, ma na anyị enweghị ike ịtụ anya ihe ijuanya ma ọ bụ foto ọ bụla na-adọrọ adọrọ maka ogo ha.
Ma agbapụ ụdịdị, anyị hụrụ naanị ụdị abụọ dị iche iche. Anyị nwere ike ime foto (nkịtị na ugbu a) ma ọ bụ jiri ya mode eserese. Na mgbakwunye na ndị a foto ụdịdị anyị nwere ọnọdụ vidiyo, na-enweghị ndị ọzọ. Na a ọnọdụ akpọrọ "tụgharịa asụsụ". Iji usoro ntụgharị asụsụ a anyị nwere ike ịtụgharị ederede ederede ejiri igwefoto tinye n'ime asụsụ ọ bụla. WIKO na-eji ya eme ihe ozugbo Ntugharị Google na ụdị ụzọ a kpọmkwem site na igwefoto.
Nọmalị mgbe anyị na-ekwu maka ngwa igwefoto nke ngwaọrụ anyị na-aga ntakịrị iji nyochaa ogo nhazi anyị hụrụ na ngalaba a. E nwere ụfọdụ ndị nrụpụta na-apụ apụ na ngwa igwefoto nyere mkpa ọ dị na ịga nke ọma nke ngwaọrụ ahụ. Mgbe ụfọdụ ngwa ahụ na “ojiji” ya dị ka igwefoto n’onwe ya na ogo ọ dị inye ya.
Ọ bụrụ na anyị enweta ntọala nhazi igwefoto ihe WIKO Y61 na-enye anyị anyị agaghị enwe ọtụtụ nsogbu. A ghaghi iburu n'uche na otutu ndi mmadu ndi mmadu kwesiri ka ndi mmadu nweta ekele a. Na nhọrọ na anyị chọpụtara bụ isi to more. Gbanwuo ma ọ bụ gbanye ọkụ ahụ, mee ka ngụ oge (na nhọrọ nke 3 ma ọ bụ 10 sekọnd), ma rụọ ọrụ ma ọ bụ gbanyụọ a ihe nzacha akpọrọ "nkwalite ihu", rụchaa.
Foto ndị WIKO Y61 sere
Anyị apụla ịnwale igwefoto nke WIKO Y61. Ekwenye na onyonyo ihe anyị gwara gị tupu ị na-ekwu maka ogo foto ọ nwere ike iwe. Na ezi eke ìhè, ezi, na ìhè dị ala, ọjọọ. Obere adịghị ike na ọnọdụ ọkụ dị ala na ọkụ ọkụ ọkụ ezughi iji melite.
Na foto a anyị hụrụ ihe omuma atu doro anya na ihe okike bu ihe obula maka igwefoto a ka enwee ike igbaputa ihe di nma. Arbọchị doro anya, awa nke anwụ zuru oke na gburugburu gburugburu ... ọ dị mfe maka ihe fọrọ nke nta ka igwefoto ọ bụla jiri ya. Otú ọ dị, ka anyị na-ele anya ihe kachasị dị anya anyị na-ahụ mgbe niile na ụdị na ntakịrị mkpọtụ.
Na foto nke ọzọ, nke anyị chọrọ ị nweta karịa nju site na mmewere dị nso, anyị na-ahụ otu esi dị mma, anyị nwekwara ike nweta ezigbo nsonaazụ. Anyị enweghị ike ịchọ ọtụtụ ihe n'aka ihe mmetụta dị mkpa dị otú ahụ, nke, dị ka anyị pụrụ ịhụ, na-agbachitere onwe ya dịtụ mma na ọnọdụ ọkụ dị mma. Ọ bụ ezie na ìhè nke anyanwụ na-efunahụ nkọ na ụfọdụ ihe.
Ugbu a anyị lere anya na mbugharị nke igwefoto foto. Anyị nwere otu akụkụ nke 4x dijitalụ mbugharị. Mbugharị dị mfe ma dị mfe nke na-achịkwa iji nwekwuo mmejọ nke ndị dijitalụ na-enwekarị na iji anya nke na-eme ihe niile ọ nwere ike.
Foto na-enweghị mbugharị
Foto nwere mbugharị
Na ngalaba nchekwa bụ akụkụ ọzọ ebe anyị chọtara adịghị ike dị mkpa na ngwaọrụ a. Karịsịa n'ihi enweghị ihe ndị anyị nwere ike ịtụle dị oke mkpa ọbụlagodi na smartphones site na ọtụtụ afọ gara aga. WIKO Y61 nwere koodu nchekwa ma ọ bụ mkpọchi ụkpụrụ. Ma ezipụla onye na-agụ akara mkpisi aka.
Enweghi mkpịsị aka mkpịsị aka na-agụ pụtara na ama ama a enweghị nkwa ndị usoro a na-enye. Ọ fọdụrụ na-echebe na Kpọghe koodu ma ọ bụ ụkpụrụ. Ma agbanyeghị na anyị nwere ike itinye ụfọdụ ngwa mpụga maka ịkpọghe ihu, ha anaghị enye ntụkwasị obi zuru ezu.
Batrị, obodo kwụụrụ ya na sọftụwia
Na-eleba anya na obodo kwụụrụ ya ọ bụrụ anyị chọtara isi okwu dị mma. WIKO Y61 nwere a 3.000 mAh Li-Ion batrị. Ugwọ nke na-adịghị njọ ma na-ekwe nkwa nnwere onwe nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị abụọ zuru ezu iji "nkịtị" mee ihe. Ego batrị dị mma nke na-enweta nnwere onwe ọzọ nyere obere oriri nke ihe ndị mejupụtara ya.
Ìhè nke ihuenyo ma ọ bụ nhazi dị elu nke ibe mgbe ịba ụba bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị bụ isi na-eme ka batrị nke smartphones kacha. Ihuenyo nwere njupụta dị ala na mkpebi dị ala na-erepịa obere karịa nke ọzọ nwere oke mkpebi dị elu, njupụta pixel dị elu na ọtụtụ nchapụta. Na nhazi 1GB, n’agbanyeghi otu isiri gbalisi idi mgbaze ọ naghị eri ihe 6GB ma, na-ebughi n'uche ike ọkụ nke kachasị dị ugbu a.
El sọftụwia jikọtara na ngwa ngwa ha na-emekwa ka ahụmịhe onye ọrụ ahụ na-eji ire ụtọ. A na-e Androidomi gam akporo na nke kachasị na iji ekwentị ama ihe mbipute nke Gam akporo 10 Gaa, ọ na-asọ dị mma karịa ka anyị nwere ike ịtụ anya na akwụkwọ.
Ihuenyo 6 anụ ọhịa IPS LCD
Nhazi ihuenyo 18: 9
Mkpebi 480 x 960 px
Njupụta 179 ppi
Ebe nchekwa Micro SD ruo 256 GB
Nhazi MediaTek Helio A20
CPU Quad-isi 1.8 GHz
Rear igwefoto otu oghere 8Mpx
Mbugharị dijitalụ 4x
Igwefoto n'ihu 5 Mpx
Batrị 3.000 mAh Li-Ion
Ibu ibu 190 g
Akụkụ 161.3 x 78.14 x 9
Ahịa 90.99 €
Linkzụta njikọ WIKO Y61
Ikwu maka ezi ihe na obere ihe nke WIKO Y61 anyị kwesịrị iburu n'uche na mpaghara ahịa ebe a gụnyere ya. Ngwaọrụ dị ọnụ ala ma dị mfe maka nke a, ọ ga-ebelata ọnụ ahịa yana ihe niile. Dabere na echiche a, anyị enweghị ike iji ya tụnyere ngwaahịa ndị ọzọ siri ike karịa maka ebumnuche doro anya.
O doro anya na ego Ama a bụ ihe kachasị mma, enwere ike ịchọta ekwentị ole na ole na-erughị € 100 nke zuru oke.
La arụmọrụ WIKO Y61 dị n'elu ihe ndị ọzọ na-enye anyị, anyị nwere ike ịsị na ọ nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla, yana ụfọdụ njedebe.
Nchekwa RAM Naanị 1 GB ọ dị ka ọ dị mkpụmkpụ, ọbụnadị ịbụ ama nke kachasị dị iche.
La ihuenyo mkpebi na-egosiputa mmejọ ya na pịnye 6-inch buru ibu.
Su Igwefoto foto na-ata ahụhụ nke ukwuu na ọnọdụ ọkụ ọkụ adịghị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyochaa WIKO Y61, bụ isi ama ama ama ama
Mgbapu A14 Bionic na iPhone 12 na-akụda mmụọ na arụmọrụ: Snapdragon 865 karịrị ya